StreamGear Fuses Smartphone sy fakantsary natokana ho an'ny Paradigma famokarana horonantsary vaovao miaraka amin'i VidiMo - Vaovao NAB Show avy amin'ny Broadcast Beat, Broadcast ofisialy NAB Show - NAB Show LIVE
Home » News » StreamGear Fuses Smartphone sy fakantsary natokana ho an'ny Paradigma famokarana horonantsary vaovao miaraka amin'i VidiMo
StreamGear Fuses Smartphone sy fakantsary natokana ho an'ny Paradigma famokarana horonantsary vaovao miaraka amin'i VidiMo
Ny vahaolana vaovaon'ny hardware-sy-app vaovao dia mamadika ny telefaona sy loharanon'ny horonantsary ivelany ho sehatra sehatra famokarana feno, hanamora kokoa noho ny teo aloha hamoronana votoaty mivantana kalitao
Novambra 7, 2019 - Famakiana, PA: Ireo mpamorona ny votoaty amin'ny horonantsary manomboka amin'ireo matihanina ho an'ireo olona liana amin'ny haino aman-jery sosialy dia afaka manana fomba tsara kokoa hizarana ny fahitàny amin'ny mpihaino azy amin'ny alàlan'ny famokarana mivantana be kalitao. Fanombohana vahaolana StreamGear Inc. hivoaka amin'ny fomba fangalarana amin'ny fihaonambe StreamGeeks Summit rahampitso any New York City amin'ny alàlan'ny famoahana azy VidiMo, fitambaran-dàlana vaovao-sy-app vaovao izay mivadika smartphone sy loharanom-baovao ivelany ho lasa horonantsary feno sy famokarana horonantsary virtoaly sy famindrana.
Manome fomba mora kokoa hamoronana sy hizarana votoaty mivantana mivantana, ny rafitra VidiMo dia mamela ny olon-tokana manana finday ary fakan-tsary mihetsika amin'ny alàlan'ny fampisehoana fahitalavitra maro izay azo alefanana mivantana, mirakitra na roa. Na dia nihatsara aza ny kalitao fakan-tsary nandritra ny taona maro, dia tsy mbola mifanandrify amin'ny fiasa mahasoa - toy ny zoom optika, fifantohana mifantoka, fanaraha-maso iris ary halalin'ny sehatry - amin'ny horonantsary natokana na fakan-tsary DSLR. VidiMo dia mamela ny mpampiasa hanana ny tsara indrindra amin'ny tontolo roa, mitondra an HDMI loharano lahatsary ao amin'ny findainy ary manambatra azy amin'ny fakan-telefaona sy loharano hafa.
VidiMo - ny ViDeo diRector on Mobile - mamela ny olona ho tonga kintana lahatsary haino aman-jery sosialy na mpanao gazety an'ny olom-pirenena. Amin'ny fampiasana tsotra indrindra, VidiMo dia mamela ny mpampiasa hisambotra ivelany HDMI loharano lahatsary ao amin'ny kaody finday iOS na Android ary alefaso izany. Saingy ny fampiasa mavitrika sy mavitrika ary haingana sy mavitrika ao amin'ny VidiMo dia ahafahan'ny mpamokatra mamorona fampisehoana mivantana, manampahaizana ary matihanina amin'ny fotoana tena tsy mila manova sy hampakatra azy ireo any aoriana.
Ny rafitra VidiMo dia misy ny rindrambaiko VidiMo Go sy rindrambaiko VidiMo App ho an'ny finday iOS sy Android. Ny endrika marika maoderina VidiMo Go dia mamolavola vahaolana famokarana tanana vita, miasa ho fitaovana fisamborana; mametaka ny haben'ny finday amin'ny fakantsary matihanina na fanatanjahantena / hetsika; ary mamela ny toeran'ny laharana finday mora foana amin'ny fifandraisana eo amin'ny fampiharana. Misambotra mivantana i VidiMo Go HDMI ary fanamafisam-peo audio amin'ny alàlan'ny finday, ary ampiakarin'ny bateria azo soloina azo soloina. Ny fampifangaroana natokana ho an'ny fampiasa sy ny ergonomika an'ny VidiMo Go dia nahatonga azy voafidy ho finaliste amin'ny 2019 International Design Excellence Awards (IDEA) nataon'ny Industrial Designers Society of America.
Mandritra izany fotoana izany, ny VidiMo App dia manome fitaovana famokarana mivantana an'ny finday. Ho an'ny fampisehoana tsirairay, ny mpampiasa dia afaka mifamadika eo amin'ny lalam-pamolavolana feno enina izay mifangaro amin'ny loharanom-peo mivantana sy loharanom-peo - anisan'izany ny HDMI loharano sy ny fakan-tsary eo alohan'ny telefaona na sary - miaraka amin'ny fakana sary, lahatsoratra ary ny famerenam-peo talohan'ny sary. Rehefa mandeha ny fotoana, ny horonantsary dia azo raisina amina finday ary alefa mivantana amin'ireo serivisy ankafizin'ny antoko fahatelo (miaraka amin'ny pretra ho an'ny YouTube ™ Live, Facebook ™ Live sy Twitch ™) na mpizara tsy miankina.
VidiMo no vokatra voalohany avy amin'ny StreamGear, mpamorona vahaolana vaovao mbola manana traikefa ary mpamokatra mifantoka amin'ny fitaovana fanamboarana fitaovana hanamora ny mpampiasa ny mamorona horonantsary avo lenta. Ny ekipan'ny mpitarika an'i StreamGear dia mirehareha tantara mahomby amin'ny famokarana horonantsary, haino aman-jery nomerika ary tsenan'ny mivantana mivantana. Ny Tale Jeneralin'ny orinasa, Darryl Spangler, dia niara-niasa tamin'ny teknolojia streaming hatramin'ny 1995 ary miasa ihany koa amin'ny maha-filoham-paritra mizara hajaina miampy hajaina fanampiny. Ny Co-Mpanorina ny StreamGear, Gerard Virga, dia tao amin'ny indostrian'ny haino aman-jery streaming hatramin'ny nananganana azy, ary tao amin'ny 2011 dia nomena anarana hoe Streaming Media Ny lisitry ny magazine "All-Stars" ho an'ny fandraisana anjara amin'ny saha.
"Ny tanjonay dia ny hanamora ny famokarana horonan-tsarimihetsika sy kalitao avo lenta amin'ny famokarana ny votoatin'ny horonan-tsarimihetsika tsara indrindra ho an'ny olon-drehetra avy amin'ny fialamboly ho matihanina matihanina, mba hahafahan'izy ireo mizara ny fahitana sy ny heviny amin'ny izao tontolo izao amin'ny fanaovan-javatra mamorona," hoy i Spangler. "VidiMo no dingana voalohany nanaovana ny asa fitoriantsika, ary hita ny fanamarihana izay azontsika hatreto tamin'ny fihetsiketsehana manokana. Tsy misy zavatra hafa an-tsena manao ny zava-drehetra azon'i VidiMo ary faly izahay manambara izany ampahibemaso ho an'ny voalohany mba hahafahan'ny mpamokatra mahita azy ireo ho azy ireo. "
"Ny sehatry ny haino aman-jery sosialy dia nahatonga ny fizarana mivantana mivantana fa misy mpampiasa an-tapitrisany maro, fa ny fampiasany ny fahaizany mivantana dia voafetra noho ny tsy fisian'ny fitaovana tsotra hamoronana fampisehoana mivantana avo lenta raha mifanaraka amin'ny votoaty nohavaozina sy nampakarina," hoy i Virga . "VidiMo dia afaka manova izany ary manetsika ny famokarana streaming mivantana mba ho lasa filam-piheverana bebe kokoa amin'ny alalàn'ny mpampiasa azy hanangana fampisehoana mivantana, navoakan-tena, na fandaharana mivantana."
Ny fisian'ny varotra amin'ny VidiMo dia andrasana amin'ny telovolana 2020 voalohany. Raha mila fanazavana fanampiny momba an'i VidiMo, tsidiho azafady www.streamgear.io.
Momba ny StreamGear - StreamGear (www.streamgear.io) miompana amin'ny alàlan'ny fampivelarana fitaovana ilaina hanamora ny mpampiasa ny mpamorona horonantsary avo lenta. Ny ekipan'ny mpitarika ny orinasa dia manana traikefa iraisan'ny dimy taona mahery amin'ny famokarana horonantsary, haino aman-jery nomerika ary tsenan'ny mivantana mivantana. Vokatra voalohany amin'ny StreamGear, VidiMo, dia namadika loharano finday sy mpamokatra horonantsary ho feno, famokarana horonantsary virtoaly sy fandefasana fampitaovana, hanamorana kokoa noho ny taloha sy ny mpankafy namorona sy mizara mahafaoka horonantsary mivantana.
Copyright 2019 StreamGear Inc. Zo rehetra voatokana. Ny marika rehetra dia fananan'ny tompony avy. Ny endri-javatra, ny vidiny, ny fahatongavana ary ireo voafaritra dia iharan'ny fanovana tsy misy fampandrenesana.
Soraty mivily Communications
Posts by Soraty farany Mitodiha Serasera (jereo rehetra)
Ny StreamGear mitondra ny haavo amin'ny ambaratonga manaraka, famokarana horonantsary amin'ny alàlan'ny Smartphone amin'ny CES 2020 - Desambra 12, 2019
Magewell mankany Premiere Ultra-Compact, 12G-SDI M.2 Capture Card ao amin'ny ISE 2020 - Desambra 10, 2019
StreamGear Fuses Smartphone sy fakantsary natokana ho an'ny Paradigma famokarana horonantsary vaovao miaraka amin'i VidiMo - Novambra 7, 2019
AV fampitana injeniera fampitana Engineering fisamborana Graham Chapman navoaka ho an'nyEditor mpanao gazety LIVE + famokarana Reporter finday avo lenta haino aman-jery sosialy Spears & Arrows streamGear Streaming Switcher TV Technology Ultra HD Forum Video fisamborana Video injeniera VidiMo	2019-11-07
Previous: RED BEE INDRINDRA AZO ATAO MBOLA KELY ETO AN-TOKONY NY FIVORIANA RANONY 2019 RUGBY TOKONY VONDRONA VOLOTRA FOTOTRA 12.8 MIVOANA ANY ITV
Next: Format RAVALAKA Blackmagic ampiasaina ao amin'ny Indie Science Fiction Thriller, Portals